Maraykanka oo kumanaan askari dheeraad ah u diraya dhulka Xarmeynka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka oo kumanaan askari dheeraad ah u diraya dhulka Xarmeynka.
On Oct 12, 2019 403 0
Wasaaradda dagaalka ee Maraykanka The Pentagon ayaa shaaca ka qaaday iney amartay in kumanaan askari oo Maraykan ah loo diro dhulka Xarameynka, kuwaas oo ku biiiraya ciidamada Maraykanka ee jooga dhulkaas.
Xoghayaha wasaaradda Gaashandhiga Maraykanka Mark Esper ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay wuxuu sheegay inuu amar ku bixiyay in dhulka Xarameynka loo daabulo 3000 oo askari, kuwaas oo ku biiraya ciidamadii Maraykanka ee horey wadankaas u joogay.
Wuxuu sheegay Mark inuu kala Hadley dhaxalsugaha maamulka Aala-Sucuud Muxamad bin Salmaan ciidamada dheeraadka ah ee loo dirayo maamulkaas, ayna isku afgarteen halkii ay degi lahaayeen.
Maraykanka ayaa sheegaya in ciidamadan ay qeyb ka yihiin siyaasadda Maraykanka ee lagu difaacayo xulafada, wuxuuna sheegay in go’aankan uu yimid wixii ka dambeeyey markii Aala-sucuud la kulmay weerar drones oo lagu burburiyay inta badan warshaddii shidaalka ee Araamko.
Wasiirka Gaashaandhiga Maraykanka in ciidamada dheeraadka ah ee loo diray Xarameynka uu codsaday dhaxalsugaha maamulka Aala-Sucuud Muxamad bin Salmaan.
Donald Trump oo isagna ka hadlay ciidamada cusub ee loo dirayo Xarameynka ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Aala-sucuud uu ballanqaaday inuu lacago badan siinayo Maraykanka, taas bedelkeedana ay ciidamada Maraykanku difaacayaan.
Tallaabadan ayaa qeyb ah duulaanka uu Maraykanku ku heysto wadamada Muslimiinta, waxaana isagoo ku mar marsiyoonaya halista Iiraan uu xoog ku heystaa halkii uu kusoo degay waxyiga, sida ay sheegayaan culimada Muslimiinta.
Horay waxaa dhulka Xarameynka u joogay ciidamo badan oo Ameerikaan ah, waxaana tani ay noqoneysaa in Maraykanku uu dib u cusbooneysiiyay duulaankii uu sagaashameeyadii ku tagay Xarameynka.
Dadka muslimiinta ee kunool dhulka Xarameynka ayaa talo gacantooda ka baxday, waxaana intii waxgarad iyo qiiro lahayd waaya hore lagu guray xabsiyada, halka inta banaanka joogtana ay cabsi iyo wal wal joogta ah ku noolyihiin.